Qatar weyn oo ku soo fool leh Somalia & Golaha amaanka oo lagu wargaliyay |
Qatar weyn oo ku soo fool leh Somalia & Golaha amaanka oo lagu wargaliyay
New York (SomaliMedia)-Madaxa Qaramada Midoobay ee dhinaca bini’aadinimada Valeria Amos ayaa codsatay lacag gaareysa ilaa 60-Milyan oo dollar taasoo la rabo in lagu daboolo xaalad halis ah oo ka taagan Soomaaliya.
Waxay golaha ammaanka QM ka u sheegtay in cunto yari, nafaqo darro iyo xaalad halis ah ay kaa taagan tahay Soomaaliya.
Ms Amos ayaa u sheegtey xubnaha golaha amaanka shaley oo arbaca aheyd in Somalia ay qatar ugu jirto cuno yari baahda iyadoo 50,000 oo caruur ay da,doodu ka hooseyso 5 sano jirka ay macluul u dhiman doonaan iyo nafaqo daro hadii aanan lacagta loo baahan yahay degd eg loo helin. waxa ay intaas raacisey in kaalmada beesha caalamka ay si weyn hoos ugu dhacdey.
Sargaalkan ka tirsan QM ayaa sheegtey guulaha amaanka iyo siyaasasada aysan wanaajin xaalada Somalia. waxa ay xustey in dadaalada bani,aadanimada ay si weyn u dhaawaceen howlgalada Milatraiga ee socda iyo xeelado cusub oo ay isticmaalayaan kooxda ALshababa ee Xiriirka la leh Al-qaacida ooh or istaagey wadooyinkii ay sahaydu mari laheyd.
Xafiiska Wararka New york